အိပ်မက်လေးတွေလှပါစေ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိပ်မက်လေးတွေလှပါစေ….
Posted by Khaing Khaing on Mar 30, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ် … ပြောပြန်ရင်လည်း မယုံကြည်သူတွေအော်တာခံရဦးမယ် …. ဒါပေသည့် ပြောတော့ပြောရမှာပဲ ….
ကျွန်မမှာ မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ် အဲဒီအကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့ ကိစ္စတစ်ခုဆို အိမ်မက်ထဲမှာ အရင်ကြိုမြင်ဖူးလေ့ရှိတာပဲ အဲဒါကကျွန်မအတွက်တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ …ဒါတွေကို အရင်ကတော့ သတိမထားမိဘူး အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲ ၀င်တော့မှ သိသိသာသာကြီးသိလားတယ် … ကျွန်မယခုလက်ရှိအလုပ်ကိုဝင်တော့ ဘုရားတရားကို အာရုံစိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်လေ … ဘုရားတရားမြဲတော့ သီလလေးကလည်းစင်ကြယ်လာတယ် အဲဒါနဲ့မကောင်းတာတွေရော ကောင်းတာတွေရော အိပ်မက်ထဲမှာ တွေ့တော့တာပဲ … ပထမဆုံးတိုက်ဆိုင်မှုကတော့ ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီမှာ သင်္ဘောသား ၂ ယောက် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုဆုံးသွားတယ် အဲဒီသင်္ဘောသား ကိစ္စတွေကို ကျွန်မလိုက်လုပ်ရတယ် တစ်နေ့ ဒုတိယတစ်ယောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လေယာဉ်ကွင်းမှာ Dead Bodyသွားထုတ်ရတယ် ဈာပနကိစ္စတွေကအစလိုက်လုပ်ရတယ် အဲအချိန်မှာ ကျွန်မစိတ်ထဲခံစားမှု တစ်ခုဝင်လာတယ် ဒီလိုကိစ္စတွေ ငါလုပ်ဖူးတယ် မြင်ဖူးသလိုပဲဆိုပြီး စိတ်ကဖြစ်လာတယ် နောက်တော့မှ ကျွန်မသတိရလိုက်တာ အိပ်မက်ထဲမှာပဲဆိုတာကိုပါ … အဲဒီအိပ်မက်က မက်ပြီးတာ ၁လလောက်တော့ကြာနေပါပြီ အဲဒီအိပ်မက်ကိုမက်ပြီးမနက်မှာ ကျွန်မတော်တော့် ကိုကြောက်ရွံခဲ့ဖူးတယ် …. သုသာန်မှာ လူသေအလောင်း၂လောင်းကို ဈာပနကိစ္စကိုလုပ်ပေးရတယ်လို့မက်ခဲ့တာ… အဲနောက်ပိုင်းကျွန်မအိပ်မက်တွေကို သတိထားမိလာတယ် အိပ်မက်မက်ပြီးရင်လည်း သက်သေအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြောပြထားမိတယ် နောက်တခါ ကျွန်မတုိ့ရုံးက ဓာတ်ပုံကပ်ထားတဲ့ ဘုတ်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှ မရှိဘူးလို့မက်ပြန်ရော အဲဒီအိမ်မက်ကတော့မက်ပြီးသိပ်မကြာဘူး ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီ ကသင်္ဘောတစ်စီးမီးလောင်သွားတယ် အဲသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖြုတ်လိုက် ရတယ်လေ … ဒီလိုနဲ့ကျွန်မအသိတစ်ယောက်ကို ပြောပြမိတယ် သူကဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးဆီကိုခေါ်သွားတယ် အဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတာ ကျွန်မလုံးဝမကြိုက်ဘူး … ဘုန်းဘုန်းကိုကျွန်မမက်တဲ့အိပ်မက်အကြောင်းတွေကိုလျှောက်တင်မိတယ် ဘုန်းဘုန်းဘုရား တပည့်တော်ရဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့စေတီပေါ်ကို ရေတွေတက်လာတာ ဘုရားကုန်းတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးသွားတယ်လို့မက်ဖူးပါတယ်ဘုရားလို့ လျှောက်တော့… ဘုန်းဘုန်းကဘေးမှာရှိတဲ့ ဒကာမတစ်ယောက်ကို အင်း ဒီပုံဆို ရန်ကုန်မြို့မှာရေကြီးဦးမယ်တဲ့ မကြာပါဘူး ရန်ကုန်မှာ အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာပြီးရေတွေကြီးတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် ၃ နှစ်ဖြစ်မယ် အဲအချိန်က နာဂစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီ အချိန်ကာလကိုကျွန်မသိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး … နောက်ထပ်မက်တဲ့အိပ်မက်တွေအကြောင်းကို ဘုန်းဘုန်းဆက်ပြီးလျှောက်တင်မိတယ် အိပ်မက်ထဲမှာရေတွေကို ကျွန်မမကြာမကြာမက်တယ် လူတွေပါပါတယ်လို့ကျွန်မလျှောက်တင်တော့ ဘုန်းဘုန်းကခေါင်းလေးတစ်ချက်ငြိမ့်ပြီး အော် .. နာဂစ်တုန်းက ဧရာဝတီတိုင်းမှာ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေမကျွတ်ဘူးလေ သူတို့တွေလဲ အမျှအတန်းလိုချင်နေကြရှာတယ်တဲ့ အဲဒါကြောင့် ဒကာမလေးဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကို မေတ္တာပို့ပေးပါတဲ့ နောက်ထပ်မက်တဲ့အိပ်မက်ကတော့ သံဃာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘုရား အဲဒါကရော ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘုရားလို့မေးတော့ ဘုန်းဘုန်းက လူတွေအမျှဝေရင် သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုပဲ အမျှဝေကြတယ်တဲ့ ပျံလွန်သွားတဲ့ဘုန်းဘုန်းတွေဆို မကျွတ်မလွတ်တာလည်းရှိနိုင်တာပဲတဲ့ အဲဒီဘုန်းဘုန်းတွေက အမျှမရကျရရှာဘူး ဒါကြောင့် ညည်းကိုအိပ်မက်ပေးတာနေမှာပေ့ါတဲ့ သူတို့ကိုအမျှအတန်းလေးဝေပေးလိုက်ပါတဲ့ …ကျွန်မလည်း ဘုန်းဘုန်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲ အမျှအတန်းဝေရင် ရေဘေးသင့်တဲ့လူတွေရော ပျံလွန်သွားတဲ့သံဃာတော်တွေ ကိုပါထည့်ဝေဖြစ်တယ် …. အဲသည်လိုအမျှအတန်းပေးရင်အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိပ်မက်တွေက မမက်တော့ဘူး တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ကသိပ်ပင်ပန်းအလုပ်မအားလို့ ဘုရားကိုဝတ်ပြုရုံပဲ ပြုလိုက်ရင် အိပ်မက်တွေကပြန်ပြန်မက်တယ် …. အမျှလိုချင်နေကြရှာမှာပေ့ါလေ မကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုတာ အမြဲရှိနေမှာကို …
နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာရှိသေးတယ် ညဘက်ဆိုခွေးတွေအူရင် ကျွန်မသိပ်ကြောက်တယ် ကျွန်မငယ်ငယ်ကခွေးဟောင်ရင် သိတာကခွေးတွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်လို့ အူတာတဲ့ အခုချိန်မှာအဲဒီကိစ္စဟုတ်မဟုတ်ကျွန်မလည်းစမ်းချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ညဘက်ခွေးတွေအူရင် အဲဒီနေရာကိုစိတ်ကိုမှန်းဆပြီး ကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဒါနတွေကို အမျှပေးလိုက်တယ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခွေးအူသံကရပ်သွားတယ်… တစ်ခါမဟုတ်ဘူး ကျွန်မအခါခါလုပ်ဖူးတယ် တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မခွေးအူသံကြားရင် အိပ်ချင်တာနဲ့အမျှမဝေဖြစ်ဘူး အဲဒီလိုအချိန်ဆိုရင် ခွေးတွေကအူတာတော်တော်နဲ့မရပ်တော့ဘူး … ကျွန်မအဲဒီလိုအဖြစ်တွေကို ယုံလည်းမယုံချင်ဘူး ဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူး…. မယုံချင်ပေမယ့် ဖြစ်နေတာကတစ်ကယ်လေ … အနည်းအကျဉ်းတော့လက်ခံမိတယ် အသိပို့ပေးတဲ့ ဘုန်းဘုန်းဆီကိုလည်းကျွန်မမကြာခဏသွားဖြစ်တယ် အိပ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောဖြစ်တယ် ဘုန်းဘုန်းကဒကာမလေး ဒါတွေကလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေက အကူအညီလိုအပ်တတ်ကြတယ် ကိုယ်ကသူတို့အတွက်ကူညီပေးရတာ အရမ်းကိုကုသိုလ်ရတယ် မြင်ရတဲ့လူ ဒုက္ခ ရောက်ရင် ကူညီလို့ရပေမယ့် မမြင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အကူအညီကိုရဖို့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဒကာမလေးရဲ့ သူ့တို့ခင်မျာ လူတိုင်းကိုအကူအညီတောင်းလို့မရနိုင်ရှာဘူးလေ ဒါကြောင့်ဒကာမလေးတို့လို့ လူတွေဆီကိုတောင်းရတာပေါ့တဲ့ နောက်ဆိုအပြင်မှာတောင် ဒကာမလေးကို အကူအညီတောင်းလိမ့်မယ်တဲ့ အို …. ကျွန်မစိတ်ထဲတော်တော်လေး ကြောက်သွားမိတယ် ကျွန်မ သရဲအရမ်းကြောက်တတ်တာ … ဘုန်းဘုန်းကဆက်ပြောပါတယ် ဒါမျိုးကလည်းး အချိန်းတိုင်းမဖြစ်ပါဘူး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ဖြစ်နေဦးမှာပဲတဲ့ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ် တစ်နေ့ ကျွန်မခြံထဲ ဆင်းပြီး ဘုရားစာရွတ်မလို့ တရားနာလာရန်အတွက် ခြံစောင့်နတ်တွေ မမြင်အပ်မြင်အပ်တွေကို ဖိတ်ကြားမိတယ် ကျွန်မကလမ်းလျှောက်ရင်း ဘုရားစာရွတ်နေမိတယ် .. ကျွန်မနောက်က ခြေသံကိုကြားနေရတယ် ကျွန်မလှည့်ကြည့်တော့ မည်သူမှမရှိ အဲဒါနဲ့ကျွန်မဆက်ပြီးဘုရားစာရွတ်တယ် ဒီလိုပဲ အနောက်ကလိုက်နေတယ် သြော် ကျွန်မသိလိုက်ပြီ စောစောကကျွန်မနှုတ်ကပင့်ဖိတ်လိုက်မိတာကို ဒီလိုသေချာကြုံလာတော့ ကျွန်မအရမ်းကြောက်တယ် ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း အိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြေးတော့တာပဲ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်ပြီး ဘုရားဆက်ရှိခိုးလိုက်တယ် ကျွန်မအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့ ဦးလေးက ဘာဖြစ်သလဲလို့မေးတယ် အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်မပြောပြတော့ ဦးလေးက အဲလိုမလုပ်ရဘူးသမီး သူတို့က သမီးရွတ်တဲ့ ဘုရားစာကို နာချင်လို့လာတာလေ သမီးခေါ်ထားတာ သူတို့သမီးကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ ဦးလေးကနှစ်သိမ့်ပေးပါတယ် ….ဆက်ပြီးအိပ်မက်အကြောင်းလေးပြောဦးမယ် အိမ်မက်ထဲမှာ ဘုရားတစ်ဆူကို မကြာခဏမက်ပြန်တယ် အဲဒီဘုရားကို ကျွန်မလုံးဝမရောက်ဖူးဘူး ဘုရားက ရေကန်ဘေးမှာရှိတဲ့ စေတီငယ်လေးပါ … ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေခဲ့တယ် စိတ်ထဲမှာတော့ အဲဒီဘုရားမှာ ကိစ္စတစ်တစ်ခုပေါ်နေတယ်လို့ တွက်ဆမိတယ် ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မဘုန်းဘုန်းကျောင်းကို အလှူကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ လှူဖွယ်ဝတ္ထုတွေသွားလှူစဉ် ဘုန်းဘုန်းပြောသံကိုကျွန်မကြားလိုက်တာ ဘုန်းဘုန်းဘုရား ၂ဆူ ပြန်လည်မွမ်းမံတည်နေတယ်လို့ပေ့ါ .. ကျွန်မလည်းဘုန်းဘုန်းကို ဘာမျှမလျှောက်ပဲ အသာလေးနေမိတယ် ပြီးမှဘုန်းဘုန်းကျောင်းက ကပ္ပိယကြီးကိုမေးကြည့်မိတယ် ဘုန်းဘုန်းနောက်ဘုရားတစ်ဆူကို ဘယ်နေရာမှာတည်နေသလဲလို့ပေ့ါ ကပ္ပိယကြီးကပြောတယ် ဘုရားနံမည်ကိုတော့ အမှန်ထည့်မပြောတော့ပါဘူး ရေကန်နားကဘုရားတစ်ဆူကိုတည်နေတယ်တဲ့ စေတီနံမည်မှာ ကန်ဆိုတဲ့နံမည်တောင်ပါတယ် ကျွန်မလည်း အရမ်းအံ့သြမိတယ် စေတီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုံသဏ္ဍန်ကိုကျွန်မပြောပြလိုက်တော့ ကပ္ပိယကြီးက ဟုတ်တယ်တဲ့ သမီးရောက်ဖူး လားလို့မေးပါတယ် ကျွန်မဘယ်လိုပြောရမလဲ အခုချိန်အထိအဲဒီစေတီကျွန်မမရောက်ဖူးပါဘူး ကျွန်မရောက်ဖူးဖို့လည်းမလွယ်ဘူး တောရွာကလေးမှာပါ … ဒါပေသည့် ဘာပဲပြောပြော ကျွန်မလှူဒါန်းစရာရှိတာကိုတော့ အဲဒီစေတီလေးအတွက်ပါလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ….. ကျွန်မမက်ဖူးတဲ့အိပ်မက်တွေကအများကြီးရှိခဲ့ ဖူးသလို ကြုံရတာတွေလည်းအများကြီးပါ ဒါပေသည့် နောက်အခါအခွင့်သင့်မှပဲ ဆက်လက်ဖော်ပြ ပေးပါမယ် အခုအိပ်မက်တွေမမက်တာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ …..အိပ်မက်မကောင်းလို့ နိုးခဲ့ရင် အဲသည်အဖြစ်တွေအပြင်မှာဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ မိုးလင်းတာနဲ့ ကျွန်မဘုရားစာရွတ် ဘုရားကိုအရင်ဆုံးဝတ်ပြုလိုက်တယ် ………. တစ်ကယ်တော့ ကျွန်မလူ့ဘ၀မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်သွားချင်တာ စိတ်ရင်းအမှန်ပါ ……..
အခိုင်တို့တော့ နာမည်ကြီးဦးမယ်………….အာဟိ အာဟိ မြင်တယ် စိတ်ကူးထဲလဲမြင်တယ်၊ အိမ်မက်ထဲလဲမြင်တယ်……………..ဒန့်တန့်တန့် အားပေးသွားပါတယ်ကွယ်
အဟင့် …. ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး ခုနက ပို့စ်တင်တာ မတက်လာဘူး …. တူရက ဇရပ်ထဲ လင့်ပေးပြီးဖွတာ ကွန်မန့်တွေကတော့တက်တယ် အခုထပ်ပြီးတင်ရတယ် အဲဒီကွန်မန့်တွေက အခုထဲမှာပေါ်မလာတော့ဘူး …. ပို့စ်လေးတစ်ခုတင်ပါတယ် တော်တော်လေးကို လုံးပန်းလိုက်ရ တယ် …. စိတ်ထိခယက်ပါတယ်အေ ….
ဟုတ်ပါ့.. စောစောက ဆူး ဒီပိုစ်မှာ လာမန်း သွားသေးတယ် အခု မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နာမည်တူ ၂ခု ဖြစ်သွားတယ်နဲ့ တူတယ်။
ခိုင်ရေ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်ပျက်ဆိုတာ တကယ်ရှိတက်ပါတယ်
တစ်ချို့ဆို အိမ်မက်ဆိုတာ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်တက်သေးတာပဲ .
ခိုင့်လို အဖြစ်ပျက်မျိုး နွယ့်ပင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ဖူးတယ်
သူရဲ့ အိမ်မက်တိုင်းကတော့ အပြင်မှာမတွေ့မကြုံရပင်မယ့် တစ်ချို့တစ်လေကတော့
အိမ်မက်ထဲက အတိုင်းဖြစ်ပျက်တာမျိုးကို ကြုံဖူးတယ်လို့ ပြောပြဖူးတယ် .
တစ်ခါတစ်လေလည်း ဘာမှ ထူးဆန်းတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ အဖြစ်ပျက်မျိုးလးတွေကို
ကြုံတွေ့တက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်ပျက်မျိုးကို ကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့ ….
ဒါကတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မနောလည်း မက်ဖူးတယ်။ အိပ်မက်က ကောင်းသော အိပ်မက်ဆိုရင် ကောင်းပေမယ့် မကောင်းသောအိပ်မက် မက်မိလို့ကတော့ တစ်နေကုန် ဘုရားစာရွတ်နေတာ မပြီးတော့ဘူး။ ဘုရားတရား အကျိုးကျေးဇူးကို မနော တစ်ခါ ပြန်ခံစားဖူးတယ်။ တစ်ည ကားကြောပိတ်လို့ အိပ်ပြန်နောက်ကျတာ ည ၁၀ နာရီလောက်ပေါ့။ အင်းစိန်ဂုံးကျော်တံတားကို ဖြတ်ဖုိ့ ကားလည်းမရှိ ဆိုက်ကားလည်း ငှားလို့မရတဲ့အချိန် တစ်ယောက်ထဲ တံတားပေါ်ဖြတ်လာမိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူသူပြတ်လတ်နေတယ်။ မနောလည်း စိတ်က ဘုရားစာရွတ်ပြီး လျှောက်ရင်း မိန်းမအဖော်တွေ့ရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဆက်လျှောက်ရင်း တံတားအလယ်ရောက်တော့ ရှေ့မှာ မိန်းမကြီး နှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်သွားနေတာ တွေ့တော့ အလွန်ပျော်သွားမိတယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့နားကို ပြေးကပ်လိုက်ရင်း လျှောက်လာတာပေါ့။ တံတားအဆင်းမှာတော့ မီးက ခပ်မှိန်မှိန်ရယ် လင်းနေတာ ဟိုဘက်ရောက်ရင်တော့ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့။ နောက် မိန်းမအဖော်တွေ ရှိတော့ အားတက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ တံတားအဆင်းလည်း ရောက်ရော ဟိုးရှေ့မှာ လမ်းမီးရောင်တော့ တွေ့နေရပြီ။ အဲဒီနားကို မရောက်ခင်မှာ ဖြတ်လမ်းမရှိဘာမရှိနဲ့ ရှေ့မှာသွားနေတဲ့ မိန်းမကြီးနှစ်ယောက် ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်သွားပါရော… မနောလည်း လမ်းကွေ့မရှိ ဖြတ်လမ်းမရှိနဲ့ ဒီမိန်းမကြီးနှစ်ယောက် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် လိုက်ရှာကြည့်မိသေးတယ်။ မြင်ကွင်းကနေ လုံးဝကို ပျောက်ကွယ်သွားတာ အတော့်ကို ထူးဆန်းတယ်။ ဒါနဲ့ နည်းနည်းလန့်သွားတယ်။ အမြန်မပြေးရုံတမယ် ဆက် လျှောက်တော့ အိမ်က လာကြိုတာ လမ်းမှာတွေ့တော့မှ ရင်အေးသွားတော့တယ်။ အဲလိုအဖြစ်က ခဏခဏကြုံဖူးတယ်။
လေးဘလက်ရေ ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါသမီးကနက်ကတင်တယ် ဘယ်ပျောက်နေလဲမသိဘူး ဒါကြောင့်ထပ်တင်တာ ဒါဆို ၂ ခုဖြစ်သွားပြီပေ့ါနော် …. အဟင့် အဟင့် စိတ်ညစ်ပါတယ် … လေးဘလက်အဲဒါဘယ်မှာတွေ့တာလဲ သမီးက မနက်ကတင်ပြီး ပထမစာမျက်နှာမှာရှာတယ် မတွေ့ဘူး လည်နေတာပဲ ….
ရှာ မှ ရှား ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ.. သာမန်ပြောရယင်တော့ လိပ်ပြာလှတယ်ပေါ့နော.. ဥပမာဆိုရရင် ကိုယ်တွေ နေရာသစ်တစ်ခုကိုရောက်လို့မေးမြန်း အကူညီတောင်းတဲ့အခါ ဒီလူ စိတ်ထားကောင်းနိုင် မကောင်းနိုင် ရွေးပြီးမှ အကူညီတောင်းသလိုပေါ့.. မမြင်ရတဲ့ ဝိဥာဉ်တွေအနေနဲ့ လည်း တခြားလူတွေထက် မခိုင်ခိုင်ကို အကူညီပိုတောင်းချင်ပုံရတယ်
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. သူတို့ တွေနဲ့ ဘစ်ဇနက်လုပ်ပါလား
KoNyeinchan ရေ ဘစ်ဇနက်လုပ်ရမလား လုပ်ဖူးတယ် မယုံမရှိနဲ့ သူတို့လုပ်လို့ထောခဲ့ဖူးတယ် ဖုန်းလေးတစ်လုံးတောင်အဖတ်တင်သွားတာ …
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့အကြောင်းလေး ရေးပါဦး မခိုင်ရေ..
ဒါဆိုရင် ခိုင်ခိုင် ဗေဒင်ဟောစားလို့ရဘီ……
တိဒယ်တိဒယ် ဒီပို့စ်တင်ရင် ဒီလိုတွေပြောမယ်ဆိုတာကို … အိမ်ကလူတွေကိုအဲသလိုပဲ ဟောပေးခဲ့တယ် … တစ်ကယ်ကြီးကို ဖြစ်ခဲ့တာနော် အခုတော့အိပ်မက်တွေသိပ်မမက်တော့ဘူး အာရုံကရွာထဲကိုရောက်နေတယ် ….. ဒါကြောင့်ပါ
အခိုင်အိပ်မက်ထဲမှာ ရွှေတိုက်စိုး လေး ပါရာဒို ဖားပြုတ်လေးစီး အုပ်အုပ်ကိုဘေးမှာတင်ပြီး ခြံကျယ်ကြီးထဲမှာ ရွာသူ၊ရွာသားတွေနဲ. ဒင်နာပေးနေတာ မက်ပေးစမ်းပါအေ…..
အံမယ် တောင်မအပုမ ညည်းက ပါရာဒိုစီးရင် နာအိပ်မက်ထဲမှာ သရဲကားပေါ်ပါလာတယ်လို့ မက်မှာပေ့ါအေ့ … ညည်းကပုတော့ ကားပေါ်မှာမမြင်ရဘူး ….
တယ်လီပသီအားကောင်းခြင်းတမျိုးလို့ ဆိုကြတယ်။ စစချင်းတော့ အဲ့လိုပေါ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေနဲ့ စတတ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကိုယ်က ဘုရားတရားလုပ်တာကြာလာရင်( ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကငြိမ်းချမ်းလာရင်) အာရုံက အကောင်းဘက်တွေပါ အားကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထူးခြား စိတ်စွမ်းအင် တမျိုးပဲ ။ ယုံပါတယ်။ ရှိပါတယ်။ သူများတိုင်းပြည်တွေက အဲ့လို ရှိတဲ့သူတွေအကြောင်းလေးတွေလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ ရုပ်ရှင်တောင် ရိုက်ကြပါသေးတယ် အဲ့လို မျိုးလေးတွေ။
သာမန်လူတွေလည်း ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ ထူးထူးခြားခြား ဘေးတွေ့တာ ကြုံရတာမျိုးဆိုရင် အိမ်က လူက အဲ့လို အိမ်မက်လေးတွေ တခါတခါ မက်တတ်ကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ရိုက်လို့ ရရင် အဲဒီ ဇတ်လမ်းကို ဖတ်တီးကတ် ကို အပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
တော်ကြာ နောက်တထုတ်မှာ.. ကပ္ပလီမကြီးတွေ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဗေဒင်ဟောသလိုမျိုး ဆံပင် စုပ်ဖွားနဲ့.. အဲဒီ အခန်းက ထည့်ပေးနေအုန်းမယ်။
မခိုင်ခိုင်ရေ ဒီအဖြစ်မျိုးက မကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူးဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီလိုမျိုးအိပ်မက်ထဲကအဖြစ်နဲ့ထပ်တူ အပြင်မှာ ကြုံတွေ့ရတာ ၄ကြိမ်ရှိသွားပြါ့ပီ ၊ တကြိမ်ကရွာမှာ၊၂ကြိမ်ကမြန်မာပြည်အတွင်းနယ်မှာ၊နောက်တကြိမ်ကတော့ အိပ်မက် မက်တာက ပြည်တွင်းမှာမက်ခဲ့ပြီး အိပ်မက်ပါအကြောင်းအရာကတော့ ကိုရီးယားမှာ တွေ့ရတာပါ၊ဒီလိုမျိုး အိပ်မက်တွေက ခဏ ခဏလဲ မမက်ပါ ၊အိပ်မက် မက်ခဲ့ရင်လဲ မက်ခဲ့တဲအိပ်မက်ပါ အကြောင်းအရာတွေအတိုင်း အပြင်မှာ တကယ်ကြုံတွေ့ရပါတယ်၊ နောက်ထပ် မက်ပြီး မတိုက်ဆိုင်သေးတာ ၃ကြိမ်ကျန်ပါသေးတယ် ပထမက ဘုရားဖူး ခရီစဉ် စုလစ်မွန်းချွန်းတွေနဲ့ တခါမှ မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာက ဘုရားစေတီ၊ဒုတိယက မွန်ပြည်နယ်ထဲက ဆရာတော်တပါးကို ဖူးခွင် ဒါလဲ မကြုံသေး၊တတိယကို ပြောရင် မရယ်ကြနဲ့နော် အဲဒါကတော့ မြို့ထဲမှာလူကူးမြင်းကြားကို မီးနီနေတုန်း လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ ဖြတ်အကူး၊ အခြားတဖက်က လူတွေကလဲ ဒီဘက်ကိုအဖြတ်မှာ အဲဒီထဲက မိန်းကလေးတယောက် နဲ့ ကျနော်ကလဲ သူ့ကိုမြင်ပြီး အံ့အားသင့်၊သူကလဲ ကျနော့်ကိုမြင်ပြီး အံ့အားတသင့်နဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေမိကြတယ်၊ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး တယောက်ကို တယောက်မသိကြပါ နောက်မှသူကလဲ ရှေ့ဆက်လျှောက်လာ ကျနော်ကလဲရှေ့ဆက်သွားရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောက်တော့ တယာက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြပြီး ကျော်ဖြတ်လာရင်းနဲ့ သူ့ကို သမင်လည်ပြန်လှည့်အကြည့်မှာ အိပ်ယာက လန့်နိုးသွားတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်နှာ၊သူ့အပြုံးနဲ့ သူဝတ်လာတဲ့ အင်္ကျံလေးကိုတော့ ယ္ခုထိမှတ်မိနေတုံးပါပဲ၊ အဲဒီ အိပ်မက်တွေ စမက်တာကတော့(၁၉၉၇၊၆လပိုင်း)ကနေ၊ယ္ခု ၂၀၁၂ထိပါ မက်ပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေကတော့ ဘ၀အတွက် ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်လို့ပဲ ပြောရမလား။မယုံရင် ပုံပြင်လို့တော့ မမှတ်ယူလိုက်ပါနဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မခိုင်ရေ …ယုံပါတယ် …. ညီမတော့ အဲ့လို သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်လေးတွေနဲ့ ကြုံချင်လိုက်တာ အရမ်းပါပဲ … ။အိပ်လိုက်တာနဲ့ .. တန်းအိပ်ပျော်တာ .. အိပ်မက်မမက်တာတောင် ကြာလှပေါ့ … ။
ဖိုင်နယ် ဒတ်စတီနေးရှင်းကြည့်ကတည်းက … သူတို့လို … ကြိုမြင်ချင်ခဲ့တာလေ … ။ အိပ်မက်ထဲမှာရော စိတ်ကူးထဲမှာရော ကြိုမြင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး … ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကို တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခုကြံနေတယ်ဆိုလျှင် စိတ်ထဲ မသင်္ကာစိတ်တော့ အလိုလိုဖြစ်လာတယ် … ။ ဒါကြောင့် သတိထားတယ် … နောက်ပိုင်း ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ် … ။
စိတ်ရဲ့ စွမ်းအင်ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ် ကြားဖူးတယ် ..ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပျပျ ဖြစ်နေတာကို တစ်ဖက်လူဆီတွန်းအားပို့ ခိုင်းစေတာမျိုးလေ … ။ သမာဓိအား အရမ်းကောင်းမှလို့တော့ပြောတယ် … ။ပါရမီနဲ့ မဆိုင်ပဲ .. လေ့ကျင့်လို့ ရနိုင်တာမျိုးတဲ့ … ကိုယ်တိုင်တော့ မလေ့ကျင့်ဖြစ်ပါဘူး … ။
ဒါပေမယ့် အစ်မရေ … စိတ်ဆက်နွယ်မှုတွေတော့ရှိတယ် … နဂါးရုံဘုရားလိုမျိုး … ရေနဲ့ ဆက်စပ် ၊မြွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဘုရားတွေရောက်လို့ ဘုရားရှိခိုးလျှင် … အရမ်းငိုချင်တာပဲ … ဘာကိုမှန်းပြီး ငိုချင်နေမှန်းမသိဘူး … ။ဘုရားတစ်ခုရောက်တုန်းကဆို … အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ငိုကြီးချက်မဖြစ်ဖူးတယ် …ဗေဒင်တွေမယုံလည်းတွက်ကြည့်တော့ … သိုက်အဆက်မို့လို့ တဲ့လေ … ။ ဇာတာတွက်ကြည့်တော့လည်း … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သိုက်ဖွားဖြစ်နေလေရဲ့ …. ။ ပြန်ခေါ်တာတွေ ဘာတွေဖြစ်မှာတော့ကြောက်တယ် … ဒီမှာက ချစ်ချစ်နဲ့ မခွဲနိုင်ဘူးပဲ …….. ။
အမခိုင်ရဲ့ အဖြစ်တွေကို ကျနော်လည်း ယုံပါတယ်လို့ …
နောက်ကနေ လိုက်လာသလိုမျိုး ခြေသံတွေ ကြားရတယ်ဆိုဒေါ့ တွေးကြည့်ရင် ကြောချမ်းစရာပါပဲ …
အဲလောက် သတ္တိရှိဒါ …
ကျနော် ကြုံခဲ့ရတာလေးကို ပြန်လည် ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးတယ် …
အိမ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို ဘုရားပန်းအိုးလေး ယူသွားရတယ် …
အဲဒီမှာ လှေကားက တက်သွားနေတဲ့အခိုက်မှာ ..
ပန်းအိုး လွှတ်ကျသွားတဲ့ ပုံရိပ်ကို မြင်လိုက်ရတယ် …
နောက် လှေကား နှစ်ထစ်လောက်လည်း တက်လိုက်ရော …
လွှတ်ကျမှာစိုးလို့ တင်းတင်း ကိုင်ထားတဲ့ ပန်းအိုးဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အောက်ကို လွှတ်ကျပြီး ကွဲသွားတာလဲ မသိပါဘူး …
စောစောက ပုံရိပ်ထဲကနဲ့ တစ်ထေရာတည်းပါပဲ …
အဲလို အဖြစ်မျိုးတွေကို တော်တော် ကြုံခဲ့ရပါတယ် ..
ပြီးတော့ အချို့သော လူတွေရဲ့ မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်မှာ သူ အိုမင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်မယ့် မျက်နှာကို ရိပ်ခနဲ မြင်လိုက်မိတာတွေမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
ဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေပါ …
သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်တွေလို့ ထင်တာပဲ …..
ဒို့သဂျီးတော့ သွားပြောလေနဲ့ …
သူက ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် ……